Edison Cavani oo Lugtiisa kaga Reebay Koobka adduunka Portugal iyo Xiddigooda Ronaldo+SAWIRRO – Gool FM
Natiijada ka soo baxday baaritaankii Korona Fayras ee Kabtanka qaranka Spain, Sergio Busquets oo la shaaciyey & Haddii uu maanta xulka la safrayo
Tababare Ronald Koeman oo rumeysan in Messi uu waayihiisa ciyaareed ku dhammaysan doono Barcelona… (Goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa heshiis kordhintiisa?)
Kooxda Real Madrid oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Manchester United ka gudbisay Raphael Varane… (Miyaa la soo diiday?)
Pele: “Waxaan doonayaa in Neymar uu jabiyo rikoorkeyga xulka Brazil”
Sidee ayaa loo kala hoggaaminayaa tartanka kabta dahabka ah ee gool-dhalinta Euro 2020?… (Yaase caawin sameeyey?)
Wakiilka Achraf Hakimi oo xaqiijiyey in xiddigu uu ka tagato Inter Milan… (Waa tee kooxda Premier League ka dheesha ee loo badinayo inuu ku biiri doono?)
Maxay ahayd sababtii uu Kevin De Bruyne ugu dabaal-degi waayey goolkii guusha ee xulkiisa u soo saaray wareegga 16-ka Euro 2020?
Sweden, England, Croatia & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaari doonto tartanka Euro 2020
Saddexda xul ee ilaa iyo haatan xaqiijiyey inay iska xaadiriyeen wareegga 16-ka tartanka Euro 2020
Copa America: Xulka Brazil oo guul sahlan la ka gaartay Peru, Xilli Neymar uu markale shabaqa soo taabtay
Edison Cavani oo Lugtiisa kaga Reebay Koobka adduunka Portugal iyo Xiddigooda Ronaldo+SAWIRRO
CR Shariif June 30, 2018
( Russia ) 30 Juunyo 2018. Uruguay ayaa gaartay wareega siddeeda markii ay guul 2-1 kaga badisay dhigooda Portugal kulankii ka dhacay Sochi.
Kulanka ayaa qeybta hore lagu kala maray 1-0 oo ay hogaanka ku heysay xulka Uruguay.
Wuxuuna goolka dhashay daqiiqadii 7-aad markii uu madax qurux badan goolka ku hubsaday Edinson Cavani oo kubbad caawinaada ka helay Luis Suarez.
Laba xul ayaa sameyay weeraro halis ah balse ma aysan suura galin inuu gool labaad uu dhasho qeybta hore.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha dambe gaar ahaan Portugal la timid goolka barbaraha waxaana u dhaliyaya daafac Pepe oo madax la helay kubbad laga soo laaday dhan gees ka laadka.
Ma aysan sii dheeraan in cayaartu ay barbaro ahaato waxaana daqiiqadii 62-aad yimid goolka labaad ee xulka Uruguay iyadoo uu markiisii laabad goolk gaaray Cavani oo si caaqibo leh shaqaba u dul dhigay kubbadda uu fogaan dheer kasoo jaray.
Balse nasiib xumo dhaliyaha labada gool ee Edison Cavani ayaa laga saaray cayaarta markii uu dhabaato sheegtay.
Xiddiga Manchester City Bernardo Silva ayaa furasd gool noqon kartay lumiyay markii uu goolka oo banaan uu kubbad dhanka sare marsiiyay.
Inta badan kulanka ayaa daqiiqadihii u dambeyay ahaa mid xulka Uruguay ay cayaaray difaaca, halka Portugal daaladooda ay dhaafi waayeen daafaca xulka koonfur America.
Xulka Portugal ayaa noqday dakii labaad ee haray koobka adduunka kadib Argentina oo cayaartii hore guuldaro culus kala kulantay France.sidaa owgeed Uruguay ayaa la dheeli doonta wareega Siddeeda koox dhigooda France.
Barcelona oo u adeegsaneysa laba dhinac heshiiska ay ku dooneyso saxiixa Willian
Maradona oo ku tilmaamay madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez inuu yahay kan ugu fiican aduunka